Warshad Mashiinka Xardho Laser - Shiinaha Soosaarayaasha Mashiinka Mashiinka Laser, Alaab-qeybiyeyaal
1390 RECI W6 CO2 Laser Tube Laser Mashiinka Mashiinka Goynta Qiimaha
Sharaxaadda Badeecadda: 1. Waddada tareenka hagaha toosan laga keeno iyo matoorka xawaaraha sare leh iyo darawalka si qarka goynta u siman yahay. 2. Qaado qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka isku-dhafan si mashiinku uga dhigo mid si joogto ah u socod la’aan buuq la'aan; 3. Hawlgal fudud, isku xigxiga ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ah, heer wax qabad, hagaajin dabacsan ee awoodda leysarka, xawaaraha iyo dhererka focal ee soosaarka maxalliga ah ama dhammaan hal mar; 4. Isku-xirka barnaamijka furan ee furan, ee la jaan qaadaya Autocad, Coreldraw, waxaa u baxay farshaxan, Photoshop iyo vector gra kale ...
Mashiinka xardho Eco2 130w laser for Plywood looxa looxa
1325 Marmar, Granite iyo Stone Laser xardho Machine
Goynta mashiinka leysarka waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee Jinan APEXCNC Equipment Co., Ltd. Waxaan aqbalnay miis buul buul leh oo leh nuugid xoog leh, oo ku habboon jarista iyo xardho waxyaabo jilicsan, sida dharka maqaarka iyo wixii la mid ah. Waxaan sidoo kale haysannaa miiska aluminium ee u adkeysan kara walxaha culus, qaadi kara maaddada 200kg, oo ku habboon jarista iyo xardho walxaha adag, sida alwaax akril iyo wixii la mid ah.
Mini Laser xardha | Yar Xardha Laser | 4060 Laser xardha ee bilowga ah
Goynta mashiinka leysarka waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee Jinan APEX CNC Equipment Co., Ltd. Waxaan aqbalnay miis buul malab leh oo leh nuugid xoog leh, oo ku habboon jarista iyo xardho waxyaabo jilicsan, sida dharka maqaarka iyo wixii la mid ah. Waxaan sidoo kale haysannaa miiska aluminium ee u adkeysan kara walxaha culus, qaadi kara maaddada 200kg, oo ku habboon jarista iyo xardho walxaha adag, sida alwaax akril iyo wixii la mid ah.
Jaban 1390 Laser xardha for Glass, looxa, caaga, Wood
Mashiinka laser goynta waa alaabada ugu weyn ee Jinan APEX CNC Qalabka Co., Ltd. Waxaan aqbalnay miiska buulka malab oo leh nuugid xoog leh, oo ku habboon jarista iyo xardho waxyaabo jilicsan, sida dharka maqaarka iyo wixii la mid ah. Waxaan sidoo kale haysannaa miiska aluminium ee u adkeysan kara walxaha culus, qaadi kara maaddada 200kg, oo ku habboon jarista iyo xardho walxaha adag, sida alwaax akril iyo wixii la mid ah.